वातावरणविद् पदमबहादुर श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्ताः वीरेन्द्रनगर बजारका नाला ल्याडफिल साइट जस्ता छन् « Rara Pati
वातावरणविद् पदमबहादुर श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्ताः वीरेन्द्रनगर बजारका नाला ल्याडफिल साइट जस्ता छन्
पदमबहादुुर श्रेष्ठ अधिवक्ता वातावरण कानुनविद् हुन् । १५ वर्षदेखि कानुन वातावरणका क्षेत्रमा संग्लन श्रेष्ठले २०७६ सालमा राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट पाएका थिए । यो पुरस्कार पाउने उनी नेपालकै पहिलो कानुन व्यवसायी हुन् । वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठसँग कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आएका बेला हामीले यहाँका सहरी वातावरणको विषयमा कुराकानी गरेका थियौं । उनै श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
यहाँको फोहोरमैला हेर्दा अत्यन्तै दुःख लाग्यो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले नेपाल सरकारले पारित स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायित्वसहितको विशेष अधिकार दिएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेको फोहोरमैला संकलन गर्ने, ढलबाट निस्केको फोहोरमैला उठाउने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । नाला सफा गर्ने सहरलाई सुन्दर बनाउने अधिकार दायित्व नगरपालिकाको हो । नगरपालिकाले पार्टनरसिपका रूपमा नगरपालिकाले अर्को संस्थालाई पनि दिन सक्छ । नगरपालिका स्वयंले पनि त्यो काम गर्न सक्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका हिसाबले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक फोहोरको सहर हो भन्न अप्ठयारो लागेन । यहाँ घर अगाडिका नालामा फोहोर थुप्रो लागेको छ । नालाहरूलाई साना ल्यान्डफिल साइटका रूपमा विकास गरिएका छन् । यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । प्लास्टिक त्यहीँ छ, व्यापारीले व्यापार गरेर छाडेको थुप्रो त्यहीँ छ । कार्टुनहरू त्यहीँ, प्लास्टिक, रक्सी खाएको बोलतहरू त्यहीँ राखिएका छन् । सललल पानी बग्ने ठाउँमा फोहोर राखिएपछि प्रदूषण बढी हुन्छ । नालामा यसरी राखिएका फोहोरका कारण पानी जम्ने, लामखुट्टे बढी जन्मिन्छन् । स्वास्थ्यका हिसावले हामीलाई हानीकारण हुने अवस्था छ । नाला सफा गर्ने, फोहोर सफा गर्ने, बाटो सफा गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हो । तर यो दायित्व नगरपालिकाले देखेको छैन ।
घर अगाडि वा बाटोमा बनाइएका नालाहरू पानी बग्नका लागि बनाइएका हुन् । त्यो फोहोर राख्ने ठाउँ हैन । यसका लागि नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ । फोहोर पहिला घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर उठाउने गाडी आएपछि फोहोर राख्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो भएको देखिएन । हरेक व्यापारी, हरेक घरधनीले नालामा फोहोर लगेर राखिदिने गरेका छन् । नगरपालिकाले फोहोर सम्झेर नलाने काम भए जस्तो लागेको छ । मैले महिनौंसम्मको फोहोर त्यहीँ थुप्रिएको पाएको छु । नगरपालिकाले त्यसको निगरानी राख्न सकेन । बिजुलीको पोल सार्वजनिक हो । हरेक बिजुलीका पोलमा साना साना व्यापारीहरूले विज्ञापन राखेका छन् । त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विज्ञापन पर्चा पम्पलेट टाँसिएको छ ।
यो पनि एक प्रकारको फोहोर नै भयो हैन ?
दृश्य प्रदूषण हटाउनु पर्ने माग गर्दै मैले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । १६ भदौ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्दै पोलमा राखिएका पर्चा पम्पलेट होर्डिङ बोर्ड पनि फोहोर हुन्, ती सबै निकाल्नु भनेर काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले त्यो दिशामा लागेको छ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार पनि गरेको मैले पाएको छु । दृश्य प्रदूषण हटाउने विषय कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो कार्यान्वयन गर्ने पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
यदि वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर बनाउने हो भने पार्टीको नारा, पर्चा, पम्मलेट, ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड पनि हटाउन जरुरी छ । यी कानुन विरुद्धका काम हुन् । नगरपालिकाले अनुमति नदिएर राखिएका सबै कुरा हटाउन जरुरी छ । उनीहरूलाई कारवाही गर्न नगरपालिकाले सकेको देखिएन ।